"မထင်​မှတ်​ထား​လောက်​​အောင်​ မြန်​မာအကကိုကျွမ်းကျွမ်းကျင်​ကျင်​ကပြလိုက်​တဲ့ နန်းဆုရတီစိုးရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်​အသစ်​​လေး" - Cele Connections
“မထင်​မှတ်​ထား​လောက်​​အောင်​ မြန်​မာအကကိုကျွမ်းကျွမ်းကျင်​ကျင်​ကပြလိုက်​တဲ့ နန်းဆုရတီစိုးရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်​အသစ်​​လေး”
ငယ်​ငယ်​ကတည်းကဇာတ်​ကားထဲ​တွေမှာ ပါဝင်​သရုပ်​​ဆောင်​ခဲ့တဲ့ ဘာဘီရုပ်​မ​လေးလိုချစ်​စဖွယ်​​ကောင်းလှတဲ့ မင်းသမီး​ချော​လေး နန်းဆုရတီစိုးနဲ့ ပရိသတ်​ကြီးကို အထူးတလည်​မိတ်​ဆက်​​ပေးဖို့မလို​လောက်​ဘူးထင်​ပါတယ်​။ နန်းဆုကဟာဆိုရင်​ သရုပ်​​ဆောင်​မှုပိုင်းမှာလည်း ​အောင်​မြင်​တဲ့ မင်းသမီးတစ်​လက်​ဖြစ်​တဲ့အပြင်​ ဂီတပိုင်းမှာလည်း ​အောင်​မြင်​​ကျော်​ကြားတဲ့ အဆို​တော်​တစ်​လက်​ဆိုလည်း မမှား​လောက်​ပါဘူး​နော်​။ သူမရဲ့သီချင်းတစ်​ပုဒ်​ဖြစ်​တဲ့”ရူး​အောင်​ချစ်​ရသူ”သီချင်းဟာဆိုရင်​ ပရိသတ်​​တွေရဲ့ပါးစပ်​ဖျားမှာ ​​ရေပန်းစား​အောင်​မြင်​​နေတဲ့သီချင်းတစ်​ပုဒ်​ပဲဖြစ်​ပါတယ်​။
နန်းဆုက​တော့ အိမ်​မှာ​နေရင်း ပရိသတ်​​တွေအတွက်​ အမှတ်​တရပုံရိပ်​​လေး​တွေနဲ့ ဗီဒီယို​လေး​တွေကို သူမရဲ့လူမှုကွန်​ယက်​စာမျက်​နှာ​ပေါ်မှာ တင်​​ပေး​လေ့ရှိပါတယ်​။ မြန်​မာနှစ်​သစ်​ရဲ့နှစ်​ဆန်းတစ်​ရက်​​နေ့မှာ နန်းဆုက​ ” tik tok​လေး​ဆော့ကာ မြန်​မာအက​လေးကထားတဲ့ ​ဗီဒီယိုဖိုင်​​လေးကို “သူမရဲ့လူမှုကွန်​ယက်​စာမျက်​နှာ​ပေါ်မှာတင်​လာခဲ့တာပဲဖြစ်​ပါတယ်​။ ဗီဒီယို​လေးထဲမှာ မြန်​မာအက​လေးကထားတာချစ်​ဖို့​အရမ်း​ကောင်းပြီး ဘက်​စုံထူးချွန်​​ကြောင်း တင်​​ပေးလိုက်​တာပါပဲ​နော်​။
CeleConnectionsပရိသတ်​​တွေအတွက်​ နန်းဆုရတီစိုးရဲ့. ဗီဒီယို​ဖိုင်​​လေးကို ပြန်​လည်​ပြီးမျှ​ဝေ​ပေးလိုက်​ပါတယ်​နော်​။ ပရိသတ်​ကြီးကလည်း နန်းဆုရတီစိုးရဲ့ အက​ဗီဒီယိုဖိုင်​​လေးကြည့်​ကာ နှစ်​သစ်​ကူးကစပြီး ​ပျော်​ရွှင်​ချမ်း​မြေ့ရ​မယ်​ထင်​ပါတယ်​။
Soure….Nan Su Yati Soe’s Facebook
“မထငျမှတျထားလောကျအောငျ မွနျမာအကကိုကြှမျးကြှမျးကငျြကငျြကပွလိုကျတဲ့ နနျးဆုရတီစိုးရဲ့ဗီဒီယိုဖိုငျအသဈလေး”
ငယျငယျကတညျးကဇာတျကားထဲတှမှော ပါဝငျသရုပျဆောငျခဲ့တဲ့ ဘာဘီရုပျမလေးလိုခဈြစဖှယျကောငျးလှတဲ့ မငျးသမီးခြောလေး နနျးဆုရတီစိုးနဲ့ ပရိသတျကွီးကို အထူးတလညျမိတျဆကျပေးဖို့မလိုလောကျဘူးထငျပါတယျ။ နနျးဆုကဟာဆိုရငျ သရုပျဆောငျမှုပိုငျးမှာလညျး အောငျမွငျတဲ့ မငျးသမီးတဈလကျဖွဈတဲ့အပွငျ ဂီတပိုငျးမှာလညျး အောငျမွငျကြျောကွားတဲ့ အဆိုတျောတဈလကျဆိုလညျး မမှားလောကျပါဘူးနျော။ သူမရဲ့သီခငျြးတဈပုဒျဖွဈတဲ့”ရူးအောငျခဈြရသူ”သီခငျြးဟာဆိုရငျ ပရိသတျတှရေဲ့ပါးစပျဖြားမှာ ရပေနျးစားအောငျမွငျနတေဲ့သီခငျြးတဈပုဒျပဲဖွဈပါတယျ။
နနျးဆုကတော့ အိမျမှာနရေငျး ပရိသတျတှအေတှကျ အမှတျတရပုံရိပျလေးတှနေဲ့ ဗီဒီယိုလေးတှကေို သူမရဲ့လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာပျေါမှာ တငျပေးလရှေိ့ပါတယျ။ မွနျမာနှဈသဈရဲ့နှဈဆနျးတဈရကျနမှေ့ာ နနျးဆုက ” tik tokလေးဆော့ကာ မွနျမာအကလေးကထားတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုငျလေးကို “သူမရဲ့လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာပျေါမှာတငျလာခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။ ဗီဒီယိုလေးထဲမှာ မွနျမာအကလေးကထားတာခဈြဖို့အရမျးကောငျးပွီး ဘကျစုံထူးခြှနျကွောငျး တငျပေးလိုကျတာပါပဲနျော။
CeleConnectionsပရိသတျတှအေတှကျ နနျးဆုရတီစိုးရဲ့. ဗီဒီယိုဖိုငျလေးကို ပွနျလညျပွီးမြှဝပေေးလိုကျပါတယျနျော။ ပရိသတျကွီးကလညျး နနျးဆုရတီစိုးရဲ့ အကဗီဒီယိုဖိုငျလေးကွညျ့ကာ နှဈသဈကူးကစပွီး ပြျောရှငျခမျြးမွရေ့မယျထငျပါတယျ။
ဘယ်သူမှမသိသေးတဲ့ အဲလက်စ်တို့ဇနီးမောင်နှံရဲ့ သားသမီးတွေအပေါ် အုပ်ထိန်းပုံအကြောင်းကို ရင်ဖွင့်ပြောပြလာတဲ့ Dora Alex